"အိမ်မှာနေရင်း အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အချက် ( ၁၁) ချက်"
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို လေ့လာနေတဲ့ သူတိုင်း အင်္ဂလိပ် စကားကို ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုချင် ကြမယ်ဆိုတာ သင်ငြင်းလို့မရပါဘူး။
သူငယ်ချင်းနဲ့ ပြောတဲ့ အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုဝင်အချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သင်ဟာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောကျွမ်းကျင် ချင်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ သင်လေ့ကျင့်မှုရှိရမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ် လေ့ကျင့်မှု ရှိမှ တိုးတက်မှုရှိတာပါ။ ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြော ကျွမ်းကျင်ချင်လို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လေ့ကျင့်ချင် တဲ့ သူတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ TV series တွေကြည့်ပါ
ဒါကတော့ အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားလေ့လာနေသူတိုင်း သိထား တဲ့ အချက်ပါပဲ။ အင်္ဂလိပ် ဘာသာ စကားစွမ်းရည်တိုးတက်ဖို့ အတွက် လမ်းညွှန်နေတဲ့ သူတော်တော်များများကလည်း ဒီအချက်ကို လက်ခံကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်… ရုပ်ရှင်တွေ၊ TV Series တွေ ကနေလေ့လာတာဟာ ထိရောက်မှု ရှိတဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုပါပဲ။ ရုပ်ရှင်တွေ၊ TV Series တွေမှ မဟုတ်ပါဘူး… Facebook ပေါ်ကVideos တွေ၊ Youtube ပေါ်က videos တွေကိုကြည့်ပြီး လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။ သူတို့ပြောတာကို နားထောင်မယ်...ပြီးရင် ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြောကြည့်ပြီး လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။
(၂) သင်အင်္ဂလိပ်လို ပြောထားတွေကို record လုပ်ပြီး ပြန်နားထောင်ပါ
ဒီအချက်ကတော့ အစပိုင်းမှာ သင့်အတွက် ထူးဆန်းရင်ထူးဆန်းနေပါလိမ့်မယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ကိုယ်ပြောနိုင်သလောက်ပြောပါ၊ record လုပ်ပါ၊ ပြန်နားထောင်ပါ.. ကိုယ့်ရဲ့ အမှားလေးတွေရှိရင် ဖြည်းဖြည်း ချင်းစီပြင်သွားပါ။ အဲ့ဒီလို လုပ်ပေးချင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောခြင်းအပေါ် ယုံကြည်မှုတွေရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုပြောတာကို record လုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းမသိရင် အစပိုင်းမှာ လွယ်ကူတဲ့ စာအုပ်လေးတွေ ဖတ်ပြီး record လုပ်ပါ။ ဒီစာအုပ်အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်သွားပြီ ဆိုရင် နောက် ခက်တဲ့ စာအုပ်ကို သုံးပါ။ ဒီလိုလေ့ကျင့်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားပြောစွမ်းရည် ကို တိုးတက်စေရုံသာမက Reding နဲ့ Writing ကိုလည်း တိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။
သီချင်းတွေ ကတော့ အများကြီးရှိပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားကို Native Languages ဖြစ်တဲ့ သူတွေက သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေရှိသလို၊ Native Languages မဟုတ်တဲ့ သူတွေသီဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ သင်ကြိုက်တဲ့ အဆိုတော်၊ သင်ကြိုက်တဲ့ သီချင်း စိတ်ကြိုက်နား ထောင်လို့ရပါတယ်။ နားထာင်တဲ့ အခါမှာတော့ သီချင်းကြီးပဲ နားမထောင်ပဲ သီချင်းထဲက စကားလုံတွေကို ပါ လေ့လာပါ။ ပြီးရင် အကျယ်ကြီးအော်ဆိုပစ်ပါ(အသံကောင်းရင်ပေါ့)။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ လေ့ကျင့်ခြင်းဟာ အိမ်မှာနေရင်း လုပ်လို့ ရာတဲ့ လွယ်ကူတဲ့ အရာလေးပါပဲ။
မှန်ရှေ့မှာ မတ်တပ်ရပ် ပါ။ တခြားသူတစ်ယောက်နဲ့ အပြန်အလှန်ပြောနေသလို မျိုး စိတ်ထားပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြောပါ။ တစ်နေ့ ကို အချိန် မိနစ်အနည်းငယ်လောက်ပေးပြီး ခေါင်းစဉ်တစ်ခုခု ကိုပြောပါ။ မှန်ရှေ့မှာပြောနေတဲ့ အတွက် သင့်ရဲ့ ပါးစပ်လှုပ်ပုံတွေ၊ လက်ဟန်ခြေဟန်တွေကို အသံနဲ့ တွဲ မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် သင် မကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အချက်လေးတွေကို လည်း ပြင် လိုရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင်အင်္ဂလိပ်စကားပြော ဘယ်လောက်ထိ တိုးတက်လာလဲ ဆိုတာကို လည်း ကိုယ် တိုင်တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) လျာလိပ်စေမယ့် စကားလေးတွေကို လေ့ကျင့်ပါ
ကျွန်တော် တို့ မြန်မာဘာသာစကားမှာ လည်း လျှာလိပ်စေမယ့် စကားလေးတွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ- "ရွှံ့ပေါ်ရှဉ့်ပြေး ရှဉ့်မွှေးရွှံ့မလူး" ၊ "တုံးအောက်ကဖား ပြားတဲ့ ဖားကပြား၊ ဖောင်းတဲ့ဖားကဖောင်း" အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ အင်္ဂလိပ်ဘာသသာ စကားမှာလည်း အဲ့လိုလျာလိပ်စေတဲ့ စကားစုလေးတွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ - “Can you canacan asacanner can canacan?” “ Which watch did which witch wear and which which wore which watch?” အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ အဲ့လို စကားလုံးတွေ ကို စကားပြော လေ့ကျင့်ပေးချင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားပြောဟာ သိသိသာသာ တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။
(၆) Collocations လုပ်ပါ
Collocation ဆိုတာကတော့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာ စာကြောင်းအရှည်ကြီးတွေပြောမယ့်အစား..စာကြောင်းထဲမှာ ပါတဲ့ စာလုံး ၂ လုံး၊ ၃ လုံး ကို အတိုချုံ့ပြီးပြောတာကို ပြောတာပါ။
(1) She needs to make her bed every day.
Collocation = Make the bed .
(2) The children need to do their homework each day after school.
Collocation = Do the homework.
(3) Would you like to opena(bank) account?
Collocation = Open an account.
(4) We have to makeabig decision as to weather we sell the car.
Collocation = A big decision.
ဒီလို Collocation တွေကို လေ့ကျင့် ပေးခြင်းအားဖြင့်လဲ သင့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောစွမ်းရည်တိုးတက်စေဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
(၇) App တွေကိုအသုံးပြုပါ
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာလို့ရတဲ့ app တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အင်တာနက် ကနေ downloaded လုပ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။ တချို့ app တွေဆို အခမဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ Duolingo ဆို အခမဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလို့ရတဲ့ App ပါ။ ဒီ Appလေးတွနဲ့ နေ့စဉ်သုံး အင်္ဂလိပ် စကားပြောအခြခံလေးတွေကို တစ်နေ့ အချိန် ၁၀ မိနစ်လောက်ပေးပြီး လေ့ကျင့်ခြင်းဟာ သင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြော ရာမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတိုးလာစေပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြောလည်း မြန်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်မှာနေရင် ဒီ App လေးတွေ အသုံးပြုပြီး လေ့ကျင့်ပါ။ သင့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ် စကားပြောအတွက် များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
သင်လေ့လာလို့ရသမျှ သင်မသိသေးတဲ့ vocabulary လေးတွေ၊ သင့်အတွက် ခက်ခဲတယ်လို့ထင်ရတဲ့ vocabulary လေးတွေကို မှတ်စု စာအုပ်မှာ သူတို့ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်နှင့်တကွ မှတ်ထားပါ။ သင်မှတ်ထားတဲ့ vocabularyလေးတွေကို သင်ဘယ်လောက်မှတ်မိလဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်စမ်းစစ်ပါ။ ပြီးရင် အဲ့ဒီစကာလုံးလေးတွေကို အသုံးပြုပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်ပါ။
သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အရာလေးတွေကစ အင်္ဂလိပ်လိုတွေးပါ။ သင်မြင်တဲ့ အရာဝတ္ထုလေးတွေကို အင်္ဂလိပ်လို ပြောကြည့်ပါ။ မသိရင် အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်သုံးပါ။ မေ့လွယ်တဲ့ စကားလုံးတွေဆို မှတ်စု စာအုပ်မှာ ထပ်မှတ်ပါ။ အဲ့ဒီ စကားလုံးတွေကို အသုံးပြုပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်ပါ။
(၁၀) သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့စကားပြောပါ
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာနေ တဲ့ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း ကော်ဖီဆိုင်မှာ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နေ့လည်စာ စားရင်းနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်ပါ။ သင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ဘယ်လိုလေ့လာကြောင်း၊ ဘယ်လောက်ထိ တိုးတက်မှုရှိကြောင်းကို ပြန်လည်ဝေမျှပါ။ ဒီနည်းဟာလည်း အင်္ဂလိပ်စကားပြောကိုအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ အပြင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လည်းယုံကြည်မှုတိုးတက်စေပါတယ်။
(၁၁) Native Speakers တွေရဲ့စကားပြောဆိုမှုကို နားထောင်ပါ
Native speakers တွေရဲ့ စကားပြောဆိုမှုတွေကို နားထောင်းခြင်းအားဖြင့် စကားပြောတဲ့ အခါ အသံအားထည့်မှုတွေနဲ့၊ အသံအနိမ့်အမြင့် အတက်အကျတွေကို နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ စာကြောင်းဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုအားထည့်လိုက်တယ်၊ ဘယ်လို အသံအနိမ့်အမြင့် တွေသုံးလိုက်တယ်ဆိုတာကို နားထောင်ပြီး သူတို့အတိုင်းလိုက်ပြော လေ့ကျင့်ပါ။
ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ အချက်လေးတွေကို တစ်နေ့အချိန် ၁၀ မိနစ် ကနေ ၁၅ မိနစ်လောက်ထိပေးပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။ မလေ့ကျင့် ခင်နှင့် လေ့ကျင့်ပြီး အခြေအနေကို ပြန်သုံးသပ် ခြင်းအားဖြင့် သင် အင်္ဂလိပ်စကားပြော ဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာလဲ ဆိုတာကိုတွေ့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အချက်လေးတွေက အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်ပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြောအမြန်ဆုံးတိုးတက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်း….
"အိမျမှာနရေငျး အင်ျဂလိပျစကားပွောလကေ့ငျြ့ဖို့ အထောကျအကူဖွဈစမေယျ့ အခကျြ ( ၁၁) ခကျြ"
အင်ျဂလိပျဘာသာစကားကို လလေ့ာနတေဲ့ သူတိုငျး အင်ျဂလိပျ စကားကို ကြှမျးကငျြစှာပွောဆိုခငျြ ကွမယျဆိုတာ သငျငွငျးလို့မရပါဘူး။ သူငယျခငျြးနဲ့ ပွောတဲ့ အခါမှာပဲဖွဈဖွဈ၊ လုပျငနျးခှငျမှာပဲဖွဈဖွဈ၊ မိသားစုဝငျအခငျြးခငျြးပဲဖွဈဖွဈပေါ့။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ သငျဟာ အင်ျဂလိပျစကားပွောကြှမျးကငျြ ခငျြသူတဈယောကျဆိုရငျတော့ သငျလကေ့ငျြ့မှုရှိရမှာ အမှနျပါပဲ။ ဘယျအရာဖွဈဖွဈ လကေ့ငျြ့မှု ရှိမှ တိုးတကျမှုရှိတာပါ။ ဒါကွောငျ့ အင်ျဂလိပျစကားပွော ကြှမျးကငျြခငျြလို့ ကိုယျကိုယျတိုငျ လကေ့ငျြ့ခငျြ တဲ့ သူတှအေတှကျ နညျးလမျးကောငျးလေးတှကေိုဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
(၁) အင်ျဂလိပျရုပျရှငျတှနေဲ့ TV series တှကွေညျ့ပါ
ဒါကတော့ အင်ျဂလိပျ ဘာသာစကားလလေ့ာနသေူတိုငျး သိထား တဲ့ အခကျြပါပဲ။ အင်ျဂလိပျ ဘာသာ စကားစှမျးရညျတိုးတကျဖို့ အတှကျ လမျးညှနျနတေဲ့ သူတျောတျောမြားမြားကလညျး ဒီအခကျြကို လကျခံကွပါတယျ။ ဟုတျပါတယျ… ရုပျရှငျတှေ၊ TV Series တှေ ကနလေလေ့ာတာဟာ ထိရောကျမှု ရှိတဲ့ လလေ့ာမှုတဈခုပါပဲ။ ရုပျရှငျတှေ၊ TV Series တှမှေ မဟုတျပါဘူး… Facebook ပျေါကVideos တှေ၊ Youtube ပျေါက videos တှကေိုကွညျ့ပွီး လကေ့ငျြ့လို့ရပါတယျ။ သူတို့ပွောတာကို နားထောငျမယျ...ပွီးရငျ ကိုယျတိုငျလိုကျပွောကွညျ့ပွီး လကေ့ငျြ့လို့ရပါတယျ။
(၂) သငျအင်ျဂလိပျလို ပွောထားတှကေို record လုပျပွီး ပွနျနားထောငျပါ
ဒီအခကျြကတော့ အစပိုငျးမှာ သငျ့အတှကျ ထူးဆနျးရငျထူးဆနျးနပေါလိမျ့မယျ။ အင်ျဂလိပျလို ကိုယျပွောနိုငျသလောကျပွောပါ၊ record လုပျပါ၊ ပွနျနားထောငျပါ.. ကိုယျ့ရဲ့ အမှားလေးတှရှေိရငျ ဖွညျးဖွညျး ခငျြးစီပွငျသှားပါ။ အဲ့ဒီလို လုပျပေးခငျြးအားဖွငျ့ သငျ့ရဲ့ အင်ျဂလိပျစကားပွောခွငျးအပျေါ ယုံကွညျမှုတှရှေိလာပါလိမျ့မယျ။ ဘယျလိုပွောတာကို record လုပျလို့ လုပျရမှနျးမသိရငျ အစပိုငျးမှာ လှယျကူတဲ့ စာအုပျလေးတှေ ဖတျပွီး record လုပျပါ။ ဒီစာအုပျအတှကျ ကိုယျ့ကိုယျကို ကနြေပျသှားပွီ ဆိုရငျ နောကျ ခကျတဲ့ စာအုပျကို သုံးပါ။ ဒီလိုလကေ့ငျြ့ခွငျးဟာ သငျ့ရဲ့ အင်ျဂလိပျ စကားပွောစှမျးရညျ ကို တိုးတကျစရေုံသာမက Reding နဲ့ Writing ကိုလညျး တိုးတကျစပေါလိမျ့မယျ။
သီခငျြးတှေ ကတော့ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ အင်ျဂလိပျ ဘာသာစကားကို Native Languages ဖွဈတဲ့ သူတှကေ သီဆိုထားတဲ့ သီခငျြးတှရှေိသလို၊ Native Languages မဟုတျတဲ့ သူတှသေီဆိုထားတဲ့ သီခငျြးတှလေညျးရှိပါတယျ။ သငျကွိုကျတဲ့ အဆိုတျော၊ သငျကွိုကျတဲ့ သီခငျြး စိတျကွိုကျနား ထောငျလို့ရပါတယျ။ နားထာငျတဲ့ အခါမှာတော့ သီခငျြးကွီးပဲ နားမထောငျပဲ သီခငျြးထဲက စကားလုံတှကေို ပါ လလေ့ာပါ။ ပွီးရငျ အကယျြကွီးအျောဆိုပဈပါ(အသံကောငျးရငျပေါ့)။ ဒီနညျးလမျးနဲ့ လကေ့ငျြ့ခွငျးဟာ အိမျမှာနရေငျး လုပျလို့ ရာတဲ့ လှယျကူတဲ့ အရာလေးပါပဲ။
မှနျရှမှေ့ာ မတျတပျရပျ ပါ။ တခွားသူတဈယောကျနဲ့ အပွနျအလှနျပွောနသေလို မြိုး စိတျထားပွီး အင်ျဂလိပျစကားပွောပါ။ တဈနေ့ ကို အခြိနျ မိနဈအနညျးငယျလောကျပေးပွီး ခေါငျးစဉျတဈခုခု ကိုပွောပါ။ မှနျရှမှေ့ာပွောနတေဲ့ အတှကျ သငျ့ရဲ့ ပါးစပျလှုပျပုံတှေ၊ လကျဟနျခွဟေနျတှကေို အသံနဲ့ တှဲ မွငျရမှာဖွဈတဲ့ အတှကျ သငျ မကွိုကျနှဈသကျတဲ့ အခကျြလေးတှကေို လညျး ပွငျ လိုရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သငျအင်ျဂလိပျစကားပွော ဘယျလောကျထိ တိုးတကျလာလဲ ဆိုတာကို လညျး ကိုယျ တိုငျတှမွေ့ငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။
(၅) လြာလိပျစမေယျ့ စကားလေးတှကေို လကေ့ငျြ့ပါ
ကြှနျတျော တို့ မွနျမာဘာသာစကားမှာ လညျး လြှာလိပျစမေယျ့ စကားလေးတှရှေိပါတယျ။ ဥပမာ- "ရှံ့ပျေါရှဉျ့ပွေး ရှဉျ့မှေးရှံ့မလူး" ၊ "တုံးအောကျကဖား ပွားတဲ့ ဖားကပွား၊ ဖောငျးတဲ့ဖားကဖောငျး" အစရှိသဖွငျ့ပေါ့။ အင်ျဂလိပျဘာသသာ စကားမှာလညျး အဲ့လိုလြာလိပျစတေဲ့ စကားစုလေးတှရှေိပါတယျ။ ဥပမာ - “Can you canacan asacanner can canacan?” “ Which watch did which witch wear and which which wore which watch?” အစရှိသဖွငျ့ပေါ့။ အဲ့လို စကားလုံးတှေ ကို စကားပွော လကေ့ငျြ့ပေးခငျြးအားဖွငျ့သငျ့ရဲ့ အင်ျဂလိပျ စကားပွောဟာ သိသိသာသာ တိုးတကျလာပါလိမျ့မယျ။
(၆) Collocations လုပျပါ
Collocation ဆိုတာကတော့ အင်ျဂလိပျဘာသာစကားမှာ စာကွောငျးအရှညျကွီးတှပွေောမယျ့အစား..စာကွောငျးထဲမှာ ပါတဲ့ စာလုံး ၂ လုံး၊ ၃ လုံး ကို အတိုခြုံ့ပွီးပွောတာကို ပွောတာပါ။
ဒီလို Collocation တှကေို လကေ့ငျြ့ ပေးခွငျးအားဖွငျ့လဲ သငျ့ရဲ့ အင်ျဂလိပျစကားပွောစှမျးရညျတိုးတကျစဖေို့ အထောကျအကူပွုပါတယျ။
(၇) App တှကေိုအသုံးပွုပါ
အင်ျဂလိပျဘာသာစကားလလေ့ာလို့ရတဲ့ app တှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။ အငျတာနကျ ကနေ downloaded လုပျပွီး အင်ျဂလိပျစကားပွောလကေ့ငျြ့လို့ရပါတယျ။ တခြို့ app တှဆေို အခမဲ့ ဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ Duolingo ဆို အခမဲ့ အင်ျဂလိပျစာလလေ့ာလို့ရတဲ့ App ပါ။ ဒီ Appလေးတှနဲ့ နစေ့ဉျသုံး အင်ျဂလိပျ စကားပွောအခွခံလေးတှကေို တဈနေ့ အခြိနျ ၁၀ မိနဈလောကျပေးပွီး လကေ့ငျြ့ခွငျးဟာ သငျ့ အင်ျဂလိပျစကားပွော ရာမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှုတိုးလာစပွေီး အင်ျဂလိပျစကားပွောလညျး မွနျလာပါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ အိမျမှာနရေငျ ဒီ App လေးတှေ အသုံးပွုပွီး လကေ့ငျြ့ပါ။ သငျ့ရဲ့ အင်ျဂလိပျ စကားပွောအတှကျ မြားစှာအထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။
သငျလလေ့ာလို့ရသမြှ သငျမသိသေးတဲ့ vocabulary လေးတှေ၊ သငျ့အတှကျ ခကျခဲတယျလို့ထငျရတဲ့ vocabulary လေးတှကေို မှတျစု စာအုပျမှာ သူတို့ရဲ့ အဓိပ်ပါယျနှငျ့တကှ မှတျထားပါ။ သငျမှတျထားတဲ့ vocabularyလေးတှကေို သငျဘယျလောကျမှတျမိလဲ ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျစမျးစဈပါ။ ပွီးရငျ အဲ့ဒီစကာလုံးလေးတှကေို အသုံးပွုပွီး အင်ျဂလိပျစကားပွောလကေ့ငျြ့ပါ။
သငျ့ရဲ့ နစေ့ဉျဖွဈပကျြနတေဲ့ အရာလေးတှကေစ အင်ျဂလိပျလိုတှေးပါ။ သငျမွငျတဲ့ အရာဝတ်ထုလေးတှကေို အင်ျဂလိပျလို ပွောကွညျ့ပါ။ မသိရငျ အင်ျဂလိပျ အဘိဓာနျသုံးပါ။ မလှေ့ယျတဲ့ စကားလုံးတှဆေို မှတျစု စာအုပျမှာ ထပျမှတျပါ။ အဲ့ဒီ စကားလုံးတှကေို အသုံးပွုပွီး အင်ျဂလိပျစကားပွောလကေ့ငျြ့ပါ။
(၁၀) သူငယျခငျြး တဈယောကျနဲ့စကားပွောပါ
အင်ျဂလိပျဘာသာစကားလလေ့ာနေ တဲ့ သူငယျခငျြး အခငျြးခငျြး ကျောဖီဆိုငျမှာ ပဲဖွဈဖွဈ၊ နလေ့ညျစာ စားရငျးနဲ့ပဲ ဖွဈဖွဈ အင်ျဂလိပျစကားပွောလကေ့ငျြ့ပါ။ သငျအင်ျဂလိပျဘာသာစကားကို ဘယျလိုလလေ့ာကွောငျး၊ ဘယျလောကျထိ တိုးတကျမှုရှိကွောငျးကို ပွနျလညျဝမြှေပါ။ ဒီနညျးဟာလညျး အင်ျဂလိပျစကားပွောကိုအထောကျအကူဖွဈစတေဲ့ အပွငျ ကိုယျ့ကိုယျကို လညျးယုံကွညျမှုတိုးတကျစပေါတယျ။
(၁၁) Native Speakers တှရေဲ့စကားပွောဆိုမှုကို နားထောငျပါ
Native speakers တှရေဲ့ စကားပွောဆိုမှုတှကေို နားထောငျးခွငျးအားဖွငျ့ စကားပွောတဲ့ အခါ အသံအားထညျ့မှုတှနေဲ့၊ အသံအနိမျ့အမွငျ့ အတကျအကတြှကေို နားလညျလာပါလိမျ့မယျ။ သူတို့ စာကွောငျးဘယျနရောမှာ ဘယျလိုအားထညျ့လိုကျတယျ၊ ဘယျလို အသံအနိမျ့အမွငျ့ တှသေုံးလိုကျတယျဆိုတာကို နားထောငျပွီး သူတို့အတိုငျးလိုကျပွော လကေ့ငျြ့ပါ။
ကြှနျတျောအပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့ အခကျြလေးတှကေို တဈနအေ့ခြိနျ ၁၀ မိနဈ ကနေ ၁၅ မိနဈလောကျထိပေးပွီး အင်ျဂလိပျစကားပွောလကေ့ငျြ့ကွညျ့ပါ။ မလကေ့ငျြ့ ခငျနှငျ့ လကေ့ငျြ့ပွီး အခွအေနကေို ပွနျသုံးသပျ ခွငျးအားဖွငျ့ သငျ အင်ျဂလိပျစကားပွော ဘယျလောကျထိတိုးတကျလာလဲ ဆိုတာကိုတှမွေ့ငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဖျောပွပေးခဲ့တဲ့အခကျြလေးတှကေ အားလုံးအတှကျ အသုံးဝငျပွီး အင်ျဂလိပျစကားပွောအမွနျဆုံးတိုးတကျကွပါစလေို့ဆုတောငျးရငျး….